Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Umuntu uyaqonda kancane ngomsebenzi wanamuhla nomsebenzi wangesikhathi esizayo, kodwa akaqondi ekupheleni lapho isintu sizongena khona. Njengesidalwa umuntu kufanele enze umsebenzi wesidalwa: Umuntu kufanele alandele uNkulunkulu kunoma yini ayenzayo; futhi kufanele wenze nganoma iyiphi indlela engikutshela ngayo. Awunandlela yokuziphathela izinto ngokwakho, futhi awukwazi ukuzilawula; konke kufanele kuyekelwe emseni kaNkulunkulu, futhi konke kuphethwe izandla Zakhe. Uma umsebenzi kaNkulunkulu ubunika umuntu ukuphela, isiphetho esimangalisayo, ngaphambilini, futhi uma uNkulunkulu Ubesebenzisa lokhu ukuheha umuntu nokwenza umuntu ukuba aMlandele—uma ubehlanganisa inkulumo nomuntu bavumelane ngokuthile—ngabe lokhu akukhona ukunqoba, futhi bekungeke kube ukusebenza impilo yomuntu. Ukuba uNkulunkulu ubengasebenzisa isiphetho ukulawula umuntu nokuzuza inhliziyo yakhe, kulokhu ngabe akaphelelisi umuntu, futhi bengeke Akwazi ukuzuza umuntu, kodwa esikhundleni salokho ubengabe usebenzisa isiphetho ukumlawula. Umuntu akakhathazeki ngalutho ngaphandle kwesigcino sekusasa, isiphetho sokugcina, nokuthi kukhona noma akukho into enhle angathembela kuyo. Uma umuntu ubenikezwa ithemba elihle ngesikhathi somsebenzi wokunqotshwa, futhi, uma ngaphambi kokunqotshwa komuntu, ubenikwa isiphetho esifanelekile angaphokophela ukufinyelela kuso, ukunqotshwa komuntu bekungeke kufeze umphumela wako, kodwa umphumela womsebenzi wokunqoba ubuzothinteka. Okungukuthi, umsebenzi wokunqoba uphumelela ngokuthatha isimiselo kanye namathemba okuhle omuntu futhi ahlulele aphinde ajezise isimo sokudlubulunda somuntu. Akwenzeki ngokukhuluma nizwane nomuntu, okungukuthi, ngokunika umuntu izibusiso nomusa, kodwa ngokuveza ukwethembeka komuntu ngokumephuca “inkululeko” yakhe nokushabalalisa amathemba akhe. Lokhu ingqikithi yomsebenzi wokunqoba. Uma umuntu ubenikezwa ithemba elihle ekuqaleni ngqa, bese umsebenzi wokujeziswa nokwahlulela bewenziwa emuva kwalokho, umuntu ubezokwemukela lokujeziswa nokwahlulela ngenxa yokuthi unamathemba, futhi ekugcineni, ukulalelwa nokudunyiswa okungenamibandela kwaNkulunkulu izonke izidalwa Zakhe bekungeke kufezeke; bekuzoba khona ukulalela okungaboni, okungenalwazi, noma umuntu ubezokwenza izicelo ngokungaboni, futhi bekuyoba nzima ngokweqile ukunqoba inhliziyo yomuntu. Ngaleyo ndlela, umsebenzi onjengalo wokunqoba ubungeke ukwazi ukuzuza umuntu, futhi ngaphezu kwalokho, ubungeke ufakazele uNkulunkulu. Izidalwa ezinjengalezi bezingeke zikwazi ukwenza umsebenzi wazo, futhi bezizoba nezivumelwano kuphela noNkulunkulu; lokhu bekungeke kube ukunqoba, kodwa umusa nezibusiso. Inkinga enkulu ngomuntu ukuthi akukho okunye akucabangayo ngaphandle kwesimiselo sakhe namathemba akhe, nokuthi uyawazisa kuze kube ngathi ayizithixo kuye. Umuntu uphokophelela uNkulunkulu ngenxa yesimiselo namathemba akhe; akadumisi uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe Ngaye. Ngakho, ekunqotshweni komuntu, ukugombela kwesakhe, ukuhala kanye nezinto ezivimbela kakhulu ukukhonza kwakhe uNkulunkulu kufanele kubhekanwe nakho futhi kuqedwe ngakho. Ngokwenze njalo, imiphumela yokunqotshwa komuntu izofezeka. Ngenxa yalokho, ezigabeni zokuqala zokunqotshwa komuntu kunesidingo sokukhipha izifiso ezidlondlobele kanye nobuthakathaka bomuntu obubulala kakhulu, futhi, ngokwenzenjalo ukuveza uthando lomuntu ngoNkulunkulu, nokushintsha ulwazi lwakhe ngempilo yomuntu, ukubuka kwakhe uNkulunkulu, kanye nencazelo mayelana nesizathu sokuba khona kwakhe. Ngale ndlela uthando lomuntu ngoNkulunkulu luyahlanzwa, okungukuthi, inhliziyo yomuntu iyanqotshwa. Kodwa esimweni sengqondo Yakhe ngazo zonke izidalwa, uNkulunkulu akanqobi ngenxa nje yokunqoba; kunalokho, Uyanqoba ukuze azuze umuntu, ngenxa yodumo Lwakhe uqobo, ukuze kubuye umfanekiso womuntu wasekuqaleni wendabuko. Uma ubenganqoba ngenxa yokunqoba nje, ukubaluleka komsebenzi wokunqoba bekuzolahleka. Okungukuthi uma, emuva kokunqoba umuntu, uNkulunkulu ubegeza izandla Zakhe ngomuntu, futhi anganaki lutho ngokuphila noma ukufa kwakhe, lokhu bekungeke kube ukuphatha isintu, futhi ukunqotshwa komuntu bekungeke kube okokumsindisa. Ukuzuzwa komuntu kuphela, okulandela emuva kokunqotshwa kwakhe kanye nokufinyelela kwakhe esiphethweni esimangalisayo, okusemqoka kakhulu kuwo wonke umsebenzi wensindiso, futhi yilokhu kodwa okungafeza inhloso yokusindiswa komuntu. Ngamanye amazwi ukufika komuntu esiphethweni esihle kuphela, kanye nokungena kwakhe ekuphumuleni okungamathemba ekufanele zonke izidalwa zibe nawo, nomsebenzi okufanele wenziwe nguMdali. Uma umuntu ubengenza lo msebenzi, ubuzokaleka kakhulu: Bekungamthatha ibanga elithile umuntu, kodwa bekungeke kumfikise esiphethweni sakhe saphakade. Umuntu akakwazi ukunquma ngenkambo yomuntu, futhi, ngaphezu kwalokho, akakwazi ukuqinisekisa ngamathemba nesiphetho esikhathini esizayo. Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu, kepha, uhlukile. Njengoba adala umuntu, Yena uyamhola; njengoba esindisa umuntu, uzomsindisa nokumsindisa, futhi uzomzuza ngokwempela; njengoba ehola umuntu, uzomletha esiphethweni esifanele; futhi njengoba adala futhi ephethe umuntu, Uyena okufanele abonelele mayelana nesimiselo somuntu namathemba. Yilokhu umsebenzi owenziwa nguMdali. Nakuba umsebenzi wokunqoba ufezeka ngokwephuca umuntu amathemba akhe, umuntu ekugcineni kufanele alethwe esiphethweni sakhe esifanele asilungiselelwe nguNkulunkulu. Ingenxa yokuthi impela uNkulunkulu uyamsebenza umuntu ingakho umuntu enesiphetho futhi nesimiselo sakhe siqinisekile. Lapha, isiphetho esifanelekile ekukhulunywa ngaso akuwona amathemba omuntu kanye nokubhekiwe ayephucwe kona ezikhathini ezingaphambilini; lezinto zombili zihlukene. Lokho umuntu anamathemba ngako, wukuphokophela izifiso zakhe zenyama ezibhensayo, kunesiphetho asilungiselwe umuntu. Lokho uNkulunkulu akulungiselele umuntu, ngaleso sikhathi, izibusiso nezithembiso ezilungiselelwe umuntu uma esenziwe msulwa, uNkulunkulu azilungiselela umuntu emuva kokudala umhlaba, futhi azingachaphazelekanga ukukhetha, imibono, ukubuka ngamehlo engqondo noma inyama yomuntu. Le siphetho asilungiselelwe umuntu oyedwa, kodwa yindawo yokuphumula yesintu sisonke. Ngakho-ke, lesi siphetho isiphetho esilungele kakhulu sonke isintu.
Umdali uzimisele ukuhlela zonke izidalwa. Akufanele ulahle eceleni noma ungalaleli noma yini Ayenzayo, noma udlubulunde Kuye. Lapho umsebenzi awenzayo ekugcineni ufeza izinhloso Zakhe, kulokhu uzothola udumo. Namhlanje, yini kungashiwo ukuthi uyinzalo kaMowabi noma uyinzalo kadrago omkhulu obomvu? Kungani kungekho nkulumo ngabantu abakhethiweyo, kuphela kunenkulumo ngezidalwa? Isidalwa—lokhu kwakuyigama lomuntu lasekuqaleni, futhi yilokhu okungubuyena bakhe ngokwemvelo. Amagama ayehluka kuphela ngoba izinkathi nezikhathi zomsebenzi ziyahluka; empeleni, umuntu isidalwa esijwayelekile. Zonke izidalwa, noma ngabe zikhohlakele kunazo zonke noma zingcwele kunazo zonke, kufanele zenze umsebenzi wesidalwa. Uma enza umsebenzi wokunqoba, uNkulunkulu akakulawuli esebenzisa amathemba, isimiselo noma isiphetho sakho. Empeleni asikho isidingo sokusebenza ngale ndlela. Inhloso yomsebenzi wokunqoba ukwenza umuntu enze umsebenzi wesidalwa, ukumenza adumise uMdali, futhi emuva kwalokhu kuphela, angangena esiphethweni esimangalisayo. Isimiselo somuntu silawulwa izandla zikaNkulunkulu. Awukwazi ukuzilawula: Naphezu kokushabasheka futhi ematasatasa ngaye uqobo, umuntu akakwazi ukuzilawula ngokwakhe. Uma ubungawazi amathemba akho siqu, uma ubungalawula isimiselo sakho siqu, ubusengaba ulokhu uyisidalwa? Ngamafushane, akukhathaliseki ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, wonke umsebenzi Wakhe ungowomuntu. Thatha, njengesibonelo, amazulu nomhlaba nazo zonke izinto uNkulunkulu azidala ukusiza umuntu: inyanga, ilanga kanye nezinkanyezi azenzela umuntu, izilwane kanye nezitshalo, intwasahlobo, ihlobo, ikwindla kanye nobusika, njalo njalo—konke kwenzelwa ukuba khona komuntu. Ngakho, akukhathaliseki ukuthi umjezisa kanjani futhi umahlulela kanjani umuntu, konke kungenxa yokusindiswa komuntu. Nakuba emphuca umuntu amathemba akhe enyama, kungenxa yokwenza musulwa umuntu, futhi ukwenziwa musulwa komuntu kungenxa yokuba khona Kwakhe. Ukuphela komuntu kusezandleni zoMdali, ngakho umuntu angazilawula kanjani?
Lapho umsebenzi wokunqoba sewuqediwe, umuntu uzolethwa ezweni elihle Le mpilo, phela, izobe isesekhona emhlabeni, kodwa izobe ingasafani nhlobo nempilo yomuntu yanamuhla. Yimpilo sonke isintu esizobanayo lapho isintu sonkana sesinqotshiwe, kuzoba isiqalo esisha somuntu emhlabeni, futhi ukuba isintu sibe nempilo enhle kangako, kuyobe kuwubufakazi bokuthi isintu sesingene embusweni omusha futhi omuhle. Kuzoba wukuqala kwempilo yomuntu noNkulunkulu lapha emhlabeni. Isisekelo sempilo enhle kangaka kufanele kube wukuthi, emuva kokuthi umuntu esenziwe msulwa futhi wanqotshwa, uyazithoba phambi koMdali. Ngakho, umsebenzi wokunqoba, isigaba sokugcina somsebenzi kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi isintu singene esiphethweni esimangalisayo. Impilo enje impilo yesikhathi esizayo yomuntu emhlabeni, yimpilo enhle kunazo zonke emhlabeni, uhlobo lwempilo elangazelelwa ngumuntu, inhlobo umuntu angakaze ayithole emlandweni womhlaba, Ngumphumela wokugcina womsebenzi wokuphatha weminyaka eyizi-6,000, yilokho isintu esikulangazelelayo kunakho konke, futhi kuyisithembiso sikaNkulunkulu kumuntu. Kepha isithembiso sakhe asikwazi ukufezeka masinyane: Umuntu uzongena ekupheleni kwesikhathi esizayo kuphela uma umsebenzi wezinsuku zokugcina sewuqediwe futhi esenqotshiwe ngokuphelele, okungukuthi lapho uSathane esehluliwe nya. Umuntu uzongabi nemvelo enesono uma esecwengiwe, ngoba uNkulunkulu uzobe esemnqobile uSathane, okusho ukuthi ngeke kube khona ukuphazamisa kwamandla anobutha, futhi azobe engekho amandla anobutha angahlasela inyama yomuntu. Ngakho umuntu uzobe ekhululekile futhi engcwele—uzobe esengene kwiphakade. Uma kuphela amandla anobutha eseboshiwe, ilapho umuntu ezobe ekhululekile konke lapho eyakhona, futhi ngaphandle kokudlubulunda noma ukuphikisana. USathane kufanele ukuthi aboshwe nje, konke kuyobe sekumhambela kahle umuntu; isimo samanje sikhona ngoba uSathane usasusa uthuthuva yonke indawo emhlabeni, futhi nangenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha wonke awukafiki ekugcineni kwawo. Uma uSathane esenqotshiwe, umuntu uzobe esekhululekile ngokuphelele; uma umuntu ezuza uNkulunkulu futhi ephuma ngaphansi kwamandla kaSathane, uyobona iLanga lokulunga. Impilo efanele umuntu ojwayelekile izobe seyizuzekile futhi; konke okufanele kube ngokomuntu ojwayelekile—njengekhono lokuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle, nokuqonda ukuthi kufanele sidle futhi sigqoke kanjani, nekhono lokuphila ngokujwayelekile—konke lokhu kuzobe sekutholakele futhi. Noma u-Eva wayengazange alingwe inyoka, umuntu bekufanele ngabe ubenale mpilo ejwayelekile emuva kokuba esedaliwe ekuqaleni. Bekufanele ngabe wadla, wagqoka, futhi waphila impilo yomuntu ejwayelekile emhlabeni. Kepha emuva kokuba umuntu esonakele, le mpilo yaphenduka iphupho elingenakufezeka, futhi kuze kube inamuhla umuntu akalokothi acabange ngamehlo engqondo izinto ezinjenga lezi. Empeleni, le mpilo enhle umuntu ayilangazelelayo, iyisidingo: Uma umuntu ubengenaso isiphetho esinje, impilo yakhe eyonakele emhlabeni beyingeke ikhawuke, futhi ukuba beyingekho impilo enhle kangaka, bekungeke kube khona isiphetho ngesimiselo sikaSathane noma isiphetho kule nkathi lapho uSathane ebusa khona emhlabeni. Umuntu kufanele afike embusweni lapho amandla obumnyama engenaku finyelela khona, futhi lapho efika khona, lokho kuyofakazela ukuthi uSathane usehluliwe. Ngale ndlela, uma kungasekho kuthikamezeka nguSathane, uNkulunkulu uqobo Lwakhe uyolawula isintu, futhi uyoyala aphinde alawule impilo yomuntu yonke; yilokhu kuphela okuyoba ukuhlulwa kukaSathane. Impilo yomuntu namuhlanje impilo enokungcola esikhathini esiningi, futhi iphinde ibe impilo yokuhlupheka nosizi. Lokhu ngeke kuthiwe ukuhlulwa kukaSathane; umuntu akakaphunyuki olwandle losizi, akakaphunyuki ebunzimeni bempilo yomuntu, noma ithonya likaSathane, futhi usenolwazi oluncinyane kakhulu ngoNkulunkulu. Bonke ubunzima bomuntu badalwa nguSathane, uSathane owaletha izinhlupheko empilweni yomuntu, futhi kuphela uma uSathane eseboshiwe umuntu uyokwazi ukuphunyuka ngokuphelele olwandle losizi. Kepha ukuboshwa kukaSathane kufezeka ngokunqotshwa nokuzuzwa kwenhliziyo yomuntu, ngokwenza umuntu impango empini noSathane.
Namuhla, ukuphokophela komuntu ukuba ngumnqobi nokupheleliswa izinto ezifunwayo ngaphambi kokuba abe nempilo ejwayelekile emhlabeni, futhi izinjongo umuntu azifunayo ngaphambi kokuboshwa kukaSathane. Eqinisweni, ukuphokophela komuntu ukuba ngumnqobi nokupheleliswa, noma ukusetshenziswa kakhulu, ukuphunyuka ethonyeni lika Sathane: ukuphokophela komuntu ukuba umnqobi, kodwa umphumela ekugcineni ukuphunyuka kwakhe ethonyeni likaSathane. Ngokuphunyuka ethonyeni likaSathane kuphela, umuntu angabe esekwazi ukuphila impilo ejwayelekile emhlabeni, impilo yokudumisa uNkulunkulu. Namhlanje, ukuphokophela komuntu ukuba ngumnqobi nokupheleliswa izinto ezifunwa ngokukhuthazela ngaphambi kokuba nempilo yomuntu ojwayelekile emhlabeni. Zifunwa esikakhulukazi ukuze ube nokuhlanzeka nokwenza iqiniso ngokubonakalayo, nangenxa yokufuna ukuphumelela ukudumisa uMdali. Uma umuntu enempilo yomuntu ojwayelekile emhlabeni, impilo engenabunzima noma usizi, ngakho umuntu ngeke angene ekuphokopheleni ukuba ngumnqobi. “Ukuba ngumnqobi” “nokupheleliswa” izinjongo uNkulunkulu azinika umuntu ukuthi azifune, futhi ngokufuna ngokuphokophela lezi zinjongo, Yena udala ukuthi umuntu enze iqiniso aphinde ayiphile impilo enohlonze. Injongo ukwenza umuntu ukuthi aphelele kanye nokumzuza, kanti ukushisekela ukuba ngumnqobi nokupheleliswa kumane kuyindlela nje. Uma, ngesikhathi esizayo, umuntu engena esiphethweni esimangalisayo, ngeke kusaphathwa ukuba ngumnqobi nokupheleliswa; kuyobe kunesidalwa ngasinye senza umsebenzi waso. Namhlanje, umuntu uyaphoqeka ukushisekela ukuthola lezi zinto ukuze kunqunywe isilinganiso azosebenzela kuso umuntu, ukuze ukushisekela komuntu kube okunemigomo nokubonakala kahle. Kungenjalo, umuntu ubeyophila esimweni esingabambeki esingacacile, bese efuna ukungena ekuphileni okuphakade, futhi uma lokhu bekunjalo, ubengeke umuntu adabukise kakhulu kunakuqala? Ukushisekela ngale ndlela, ngaphandle kwemigomo noma izimiso—akukhona yini ukuzikhohlisa? Ekugcineni, lokushisekela bekungavele kube yize nje; ekugcineni, umuntu ubezolokhu ephila ngaphansi kwamandla kaSathane futhi ubengeke akwazi ukuzophula kuwona. Kungani azifake ekushisekeleni okuyize kakhulu kangaka? Ngesikhathi umuntu engena esiphethweni saphakade, umuntu uzokhonza uMdali, futhi ngenxa yokuthi umuntu usezuze insindiso futhi wangena esikhathini saphakade, umuntu ngeke esashisekela ukuthola nanoma iziphi izinjongo, nangaphezu kwalokho, ngeke adinge ukukhathazeka ngokuthi uvinjezelwe impi kaSathane. Ngale sikhathi, umuntu uyoyazi indawo yakhe, futhi enze umsebenzi wakhe, kanti futhi noma angajeziswa noma angahlulelwa, wonke umuntu uyokwenza umsebenzi wakhe. Ngaleso sikhathi, umuntu uyoba isidalwa ngokobunjalo nangokwesikhundla. Ngeke kusaba khona ukuhlukanisa phakathi kwabaphakeme nabaphansi; umuntu ngamunye uyobe emane enza umsebenzi ohlukile. Kepha umuntu uyolokhu ephila endaweni eyisiphetho ehlelekile efanelekile yesintu, umuntu uyokwenza umsebenzi wakhe ukuze akhonze uMdali, futhi isintu esinjenga lesi kuyoba isintu saphakade. Ngaleso sikhathi, umuntu uyobe esezuze impilo ekhanyiswe nguNkulunkulu, impilo ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa nguNkulunkulu, kanye nempilo ndawonye noNkulunkulu. Isintu siyophila impilo ejwayelekile emhlabeni, futhi isintu sisonke, siyongena emgudwini ofanele. Uhlelo lokuphatha lweminyaka eyizi-6,000 luyobe selumnqobe lwaqeda uSathane, okusho ukuthi uNkulunkulu uyobe esephinde wawuthola umfanekiso womuntu wasekuqaleni emuva nje kokudalwa, futhi ngaleyo ndlela, inhloso yasekuqaleni kaNkulunkulu iyobe igcwalisekile. Ekuqaleni, ngaphambi kokuthi isintu sonakaliswe nguSathane, isintu sasiphila impilo ejwayelekile emhlabeni. Emuva kwalokho, ngesikhathi esonakalisiwe nguSathane, umuntu walahlekelwa yile mpilo ejwayelekile, futhi kwaba ukuqala komsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, nempi noSathane ukukhulula impilo ejwayelekile yomuntu. Kuphela uma umsebenzi weminyaka eyizi-6,000 wokuphatha kukaNkulunkulu usufike ekupheleni, impilo yesintu sonke iyoqala ngokusemthethweni emhlabeni, ingaleso sikhathi kuphela umuntu eyoba nempilo enhle ngokumangalisayo. Futhi uNkulunkulu uyokhulula inhloso yokudala umuntu ekuqaleni, kanye nomfanekiso wokuqala womuntu. Ngakho, uma esenempilo ejwayelekile yesintu emhlabeni, umuntu ngeke asashiseleka ukuba umnqobi noma ukupheleliswa, ngoba umuntu uyobe esengcwele. “Abanqobi” kanye “nokupheleliswa” abantu abakhuluma ngakho kuyizinjongo ezinikwe umuntu ukuba aphokophele azifune ngesikhathi sempi phakathi kukaNkulunkulu noSathane, futhi zikhona kuphela ngoba umuntu wonakala. Kungokukunika injongo, nokukwenza uyishisekele leyo njongo, ukuthi uSathane uyohlulwa. Ukukucela ukuba ube ngumnqobi noma ukuba upheleliswe noma ukuba usetshenziswe ukukucela ukuba ube wufakazi ukuze udumaze uSathane. Ekugcineni, umuntu uyophila impilo yomuntu ojwayelekile emhlabeni, futhi umuntu uyoba ngcwele, futhi uma lokhu kwenzeka, basayofuna ukuba ngabanqobi? Abazona bonke izidalwa? Ukuba ngumnqobi nokuba ngophelelisiweyo kokubili kuqondiswe kuSathane, nokungcola okukhulu komuntu. Lo “mnqobi” akaphathelene nokunqoba uSathane namandla obutha? Uma uthi sewuphelelisiwe, yini kuwe ephelelisiwe? Akuve kuwukuthi usuzihlukanisile nesimo esonakele sobu sathane, ukuze ufinyelele othandweni oluphakeme kakhulu lukaNkulunkulu? Lezi zinto zishiwo mayelana nezinto ezingcole kakhulu ezikumuntu, namayelana noSathane; azikhulunywa mayelana noNkulunkulu.
Namhlanje, uma ungashisekeli ukuba umnqobi nokupheleliswa, esikhathini esizayo, uma umuntu esephila impilo ejwayelekile emhlabeni, ngeke kube khona ithuba lokwenza lokhu. Ngaleso sikhathi, isiphetho sawo wonke umuntu siyobe sesembuliwe. Ngaleso sikhathi kuyobe kucacile ukuthi uyinhloboni yento, futhi uma ufisa ukuba ngumnqobi noma ufisa ukupheleliswa kuyobe kungasenakwenzeka. Ukuthi kuphela, ngenxa yokudlubulunda kwakhe, umuntu uyojeziswa, emuva kokwembulwa. Ngaleso sikhathi, ukushisekela komuntu ngeke kusaba isikhundla esingaphezulu kwezinye, ukuthi abanye babe ngabanqobi nabanye bapheleliswe, noma abanye babe ngamadodana angamazibulo kaNkulunkulu kanti abanye babe amadodana kaNkulunkulu; ngeke besashisekela lezi zinto. Bonke bayoba izidalwa zikaNkulunkulu, bonke bayophila emhlabeni. Manje isikhathi sempi phakathi kukaNkulunkulu noSathane, isikhathi lapho lempi isazophothulwa, isikhathi lapho umuntu engakazuzeki ngokuphelele, futhi isikhathi sokuguquka. Ngakho, umuntu kufuneka ashisekele ukuba umnqobi noma omunye wabantu baNkulunkulu. Namhlanje kunomahluko ezikhundleni, kodwa uma sesifika isikhathi ngeke usaba khona umahluko onjalo: isikhundla sabo bonke abanqobile siyobe sifana, bayobe bonke beyisintu esifanelekile, futhi bayophila ngokulingana emhlabeni, okusho ukuthi bonke bayoba izidalwa ezifanelekile, futhi abayokunikwa kuyobe kufana. Ngenxa yokuthi izinkathi zomsebenzi kaNkulunkulu zihlukene, nalabo umsebenzi owenziwa kubona nabo bahlukile, uma lo msebenzi wenziwa kinina, nifanelekile ukupheleliswa futhi ukuba nibe ngabanqobi; uba bewenziwa phesheya, bebezofaneleka ukuba iqembu lokuqala labantu lokunqotshwa, kanye neqembu lokuqala ukupheleliswa. Namhlanje, lo msebenzi awenziwa phesheya, ngakho abafanelekile ukuba bapheleliswe nokuthi babe ngabanqobi, futhi kungenzeke neze ukuba babe iqembu lokuqala. Ngenxa yokuthi labo umsebenzi owenziwa kubo bahlukile, inkathi yomsebenzi kaNkulunkulu ihlukile, nesilinganiso sawo sihlukile, ngakho kuneqembu lokuqala, okungukuthi, bangabanqobi, ngakho futhi kuyoba khona iqembu lesibili eliyopheleliswa. Uma sekukhona iqembu lokuqala eseliphelelisiwe, kuzobakhona isifanekiso nesilinganiso, ngakho ngesikhathi esizayo kuyoba khona iqembu lesibili nelesithathu lalabo abaphelelisiwe, kodwa phakade bayobe bonke befana, futhi kuyobe kungekho ukuhlukanisa ngezikhundla. Bayobe bepheleliswe ezikhathini ezihlukene, futhi kuyobe kungekho mahluko ngesikhundla. Uma sifika isikhathi lapho wonke umuntu esenziwe waphelela, nomsebenzi womhlaba jikelele sewuqediwe, kuyobe kungekho mehluko ngokwesikhundla, futhi bonke bayoba nesikhundla esifanayo. Namhlanje lo msebenzi wenziwa phakathi kwenu ukuze nibe ngabanqobi. Ukuba bewenziwa eBhrithani, iBhrithani beyizoba neqembu lokuqala, ngendlela efanayo nokuthi nani nizokuba yiqembu lokuqala. Ukuthi nje nibusiswe ngokukhethekile ngomusa endleleni umsebenzi owenziwa ngayo kini namhlanje, futhi uma bengingawenzi lo msebenzi kini, benizoba ngokufanayo iqembu lesibili, noma elesithathu, noma elesine noma elesihlanu. Lokhu kumane kungenxa yomahluko wokulandelana komsebenzi; iqembu lokuqala neqembu lesibili akusho ukuthi elinye lingaphezulu noma lingaphansi kwelinye, kumane kusho ukulandelana kokupheleliswa kwala bantu. Namhlanje lamazwi ayakhulunywa kuwena, kodwa kungani ubungazwisisanga ngaphambilini? Ingoba, ngaphandle kwenqubo, abantu bavame ukuphaphalaza ngokweqisa. Njengesibonelo, uJesu wathi ngaleso sikhathi: “Njengoba Mina ngihambile, ngiyofika kanjalo futhi.” Namhlanje, abaningi basha amashushu ngala mazwi, futhi bafuna kuphela ukugqoka izingubo ezimhlophe bese belinda ukuhlwithwa ukuya ezulwini. Ngakho, maningi amazwi angenaku khulunywa ngaphambi kwesikhathi kakhulu; uma abe khulunywe ngaphambili kakhulu kwesikhathi umuntu ubezophaphalaza ngokweqisa. Isiqu somuntu sincane kakhulu, futhi akakwazi ukudlula ngokubona abone neqiniso lala mazwi.
Lapho umuntu ethola impilo yangempela yomuntu emhlabeni, namandla kaSathane ewonke eboshiwe, umuntu uyophila kalula emhlabeni. Izinto ngeke zibe nkimbinkimbi njengoba ziyizo manje: ubudlelwane babantu, ubudlelwane bokuhlalisana kwabantu, ubudlelwano bemindeni obunkimbinkimbi…, Buwuhlupho kakhulu, kubuhlungu kakhulu! Impilo yomuntu lapha ilusizi kakhulu! Uma umuntu esenqotshiwe, inhliziyo nomqondo wakhe uzoshintsha: uzoba nenhliziyo emazisayo uNkulunkulu kanye nenhliziyo emthandayo uNkulunkulu. Uma bonke labo abasemhlabeni jikelele abafuna ukuthanda uNkulunkulu sebenqotshiwe, okungukuthi, uma uSathane esenqotshiwe, futhi uma uSathane—wonke amandla obumnyama—eseboshiwe, impilo yomuntu emhlabeni ngeke isaba nokukhathazeka, futhi uyokwazi ukuphila ngokukhululeka emhlabeni. Uma impilo yomuntu ingenabo ubudlelwano obungobenyama, futhi ingasenabo ubunkimbinkimbi benyama, bekuyoba lula kakhulu. Ubudlelwano bomuntu obungobenyama bunkimbinkimbi kakhulu, futhi ukuba komuntu nalezi zinto ezinje kungubufakazi bokuthi akakazikhululi ethonyeni likaSathane. Ukuba ubunobudlelwano obufanayo nodadewenu nabafowenu ngamunye, njengobudlelwano nomndeni wakho ojwayelekile, ubungeke ube nokukhathazeka, futhi ubungeke udinge ukukhathazeka ngamuntu. Bekungamnandi lokho, futhi ngale ndlela umuntu ubengabe uphunyuziwe engxenyeni yokuhlupheka kwakhe. Ukuphila impilo yomuntu ejwayelekile emhlabeni, umuntu uzobe efana nengilosi; nakuba esengowenyama, uzobe efana nengilosi kokuningi. Lesi isithembiso sokugcina, isithembiso sokugcina esinikwe umuntu. Namhla umuntu ubhekana nokujeziswa nokwahlulelwa; ucabanga ukuthi ukudlula komuntu kulezi zinto akusho lutho? Ungenziwa umsebenzi wokujezisa nokwahlulela ngaphandle kwesizathu? Phambilini kuke kwathiwa ukusola nokwahlulela umuntu ukumfaka kwalasha, okusho ukuthatha isiphetho kanye namathemba akhe. Lokhu kungenxa yento eyodwa: ukuhlanzwa komuntu. Umuntu akafakwa kwalasha ngamabomu, emuva kwalokho uNkulunkulu ebese egeza izandla Zakhe ngaye. Esikhundleni salokho, okokubhekana nokuhlubuka okukumuntu, ukuze ekugcineni izinto ezikumuntu zihlanzeke, ukuze abe nolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, futhi abe ngumuntu ongcwele. Uma lokho kwenziwe, konke kuyofezeka. Empeleni, uma lezo zinto ezikumuntu ekufanele kubhekwane nazo, sekubhekwene nazo, futhi ekufakazela lokhu kakhulu, uSathane naye uyobe esehluliwe, futhi nakuba kungenzeka ukuba zisekhona ezimbalwa zalezo zinto ezikumuntu kusukela ekuqaleni ezingakahlanzeki ngokuphelele, uma uSathane esenqotshiwe, ngeke zisadala inkinga, futhi ngaleso sikhathi umuntu uyobe esehlanzekile ngokuphelele. Umuntu akakaze ayizwe impilo enjalo, kodwa uma uSathane esehluliwe, konke kuyolunga kanti lezo zinto ezincane eziku muntu ziyoxazululwa; zonke ezinye izinkathazo ziyoxazululeka uma inkinga esemqoka isixazululiwe. Ngalesi sikhathi sokuthatha kukaNkulunkulu umzimba wobuntu emhlabeni, lapho enza umsebenzi Wakhe Yena ngokoqobo phakathi kwabantu, wonke umsebenzi awenzayo owokwehlula uSathane, futhi uzomehlula uSathane ngokunqoba umuntu nokumenza aphelele. Uma unobufakazi obuhlokomayo, nalokhu, kuyobe kuwuphawu lokwehlulwa kukaSathane. Umuntu uqala ngokunqotshwa futhi ekugcineni apheleliswe ngokuphelele ukuze kuhlulwe uSathane. Eqinisweni, empeleni, kuhlangene nokuhlulwa kukaSathane, lokhu kungukusindiswa kwaso sonke isintu kulolu lwandle losizi olungenalutho. Akukhathaliseki noma lomsebenzi wenziwa emhlabeni wonke jikelele noma eShayina, wonke owokwehlula uSathane nokuletha insindiso esintwini sonke ukuze umuntu angene endaweni yokuphumula. UNkulunkulu osesimweni somuntu, le nyama ejwayelekile, ingenxa yokwehlula uSathane ngqo. Umsebenzi waNkulunkulu osenyameni usetshenziswa ukuletha insindiso kubo bonke abangaphansi kwezulu abathanda uNkulunkulu, ungowokunqoba sonke isintu, kanti, nangaphezu kwalokho, owokwehlula uSathane. Umnyombo wawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha ungehlukaniswe nokuhlulwa kukaSathane ukuletha insindiso esintwini sonke. Kungani, ebuningini balo msebenzi, kuhlale kuthiwa wena kufanele ufakaze? Futhi lo bufakazi buqondiswe kubani? Akuqondisiwe kuSathane? Lo bufakazi benziwa kuNkulunkulu, futhi kwenziwa ukufakaza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ukwazile ukuba nomphumela wawo. Ukufakaza kuhambelana nomsebenzi wokunqoba uSathane; ukuba bekungekho impi noSathane, umuntu bekungeke kufuneke ukuthi afakaze. Yingoba uSathane kufanele ahlulwe, ukuthi ngesikhathi esindisa umuntu, uNkulunkulu ufuna ukuthi umuntu afakazele Kuye, phambi kwaSathane, lokho ukusebenzisa ukusindisa umuntu nokulwa noSathane. Ngenxa yalokho, umuntu ungumenziwa okwenziwa kuye insindiso, futhi okwesibili, uyithuluzi ekuhlulweni kukaSathane, ngakho umuntu usemnyombeni womsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu, kanti uSathane umane ungumenziwa wencithakalo, isitha. Ungezwa sengathi awenzanga lutho, kodwa ngenxa yezinguquko esimweni sakho, ubufakazi sebuthuliwe, kanti lo bufakazi buqondiswe kuSathane futhi abenziwa kumuntu. Umuntu akafanele ukujabulela ubufakazi obunjalo. Angaqonda kanjani umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu? Lowo oqondiwe ekulweni kukaNkulunkulu nguSathane; umuntu, okwangaleso sikhathi, ungumenziwa wensindiso. Umuntu unesimo esikhohlakele sobusathane, futhi akakwazi ukuqonda lo msebenzi. Lokhu kungenxa yokukhohlakala kukaSathane futhi akuyona imvelo yomuntu, kodwa kuqhutshwa nguSathane. Namuhla, umsebenzi kaNkulunkulu osemqoka ukuhlula uSathane, okusho ukuthi, ukunqoba umuntu ngokuphelele, ukuze umuntu afakaze okokugcina kuNkulunkulu ngaphambi kwaSathane. Ngalendlela, zonke izinto ziyofezeka. Ezikhathini eziningi, emehlweni akho enyama kubonakala sengathi akukho okwenziwe, kodwa, empeleni, umsebenzi sewuqediwe. Umuntu ufuna ukuthi wonke umsebenzi wokuqeda ubonakale, kepha ngaphandle kokuwenza ubonakale kuwe, Sengiwuqedile umsebenzi Wami, ngoba uSathane usethobile, okusho ukuthi usehluliwe ngokuphelele, ukuthi konke ubuhlakani, amandla negunya likaNkulunkulu limnqobile uSathane. Lokhu yibo kanye ubufakazi okufanele buthulwe, nakuba kungacacile kumuntu, noma kungabonakali emehlweni enyama, uSathane usenqotshiwe kakade. Lo msebenzi wonkana uqondiswe kuSathane, futhi wenziwa ngenxa yempi noSathane. Ngakho, ziningi izinto umuntu angaziboni ngokuthi zibe yimpumelelo, kodwa emehlweni kaNkulunkulu, zaba impumelelo kudala. Lokhu elinye lamaqiniso angaphakathi omsebenzi wonke kaNkulunkulu.
Uma uSathane esenqotshiwe, okungukuthi, uma umuntu esenqotshiwe ngokuphelele, umuntu uzoqonda ukuthi wonke lo msebenzi ungenxa yensindiso, nokuthi indlela yale nsindiso ukubuyisa futhi ezandleni zikaSathane. Iminyaka eyizi-6,000 yomsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha ihlukaniswe ezigabeni ezintathu: iNkathi yoMthetho, iNkathi yoMusa kanye neNkathi yoMbuso. Le zigaba ezintathu zomsebenzi zonke ezokusindiswa kwesintu, okungukuthi, ezokusindiswa kwesintu esonakaliswe kakhulu nguSathane. Ngesikhathi esifanayo, kepha, ezokuthi uNkulunkulu alwe noSathane. Ngakho, njengoba umsebenzi wensindiso uhlukaniswe izigaba ezintathu, ngokunjalo impi noSathane ihlukaniswe izigaba ezintathu, futhi le zingxenye zombili zomsebenzi kaNkulunkulu zenzeka ngesikhathi esisodwa. Impi noSathane, empeleni, eyokusindiswa kwesintu, futhi ngenxa yokuthi umsebenzi wokusindiswa kwesintu akuyona into engaqedwa ngempumelelo esigabeni esisodwa, impi noSathane nayo ihlukaniswe ngezigaba nezinkathi, futhi nempi iliwa noSathane ngokuhambisana nezidingo zomuntu kanye nezinga lokonakaliswa kwakhe nguSathane. Mhlawumbe, ekucabangeni ngamehlo engqondo komuntu, ukholwa ukuthi kule mpi uNkulunkulu uzohloma izikhali abhekane noSathane, ngendlela efanayo namabutho amabili angalwa ngayo. Lokhu yinto kuphela engacatshangwa umqondo womuntu, futhi ingumbono ongaqondakali futhi ongacatshangisiwe kakhulu kabi, kepha yilokho umuntu akukholwayo. Futhi ngoba ngithi lapha indlela yensindiso yomuntu idlula empini noSathane, umuntu ucabanga ukuthi impi yenzeka kanje. Emsebenzini wensindiso yomuntu, izigaba ezintathu zenziwe, okungukuthi impi noSathane ihlukaniswe izigaba ezintathu ngaphambi kokuhlulwa okuphelele kukaSathane. Kepha iqiniso elingaphakathi lomsebenzi wonkana wempi noSathane lithi imiphumela yawo itholakala ngezinyathelo zomsebenzi eziningi: ukuthela umusa phezu komuntu, kanye nokuba umhlabelo wesono womuntu, ukuthethelela izono zomuntu, ukunqoba umuntu, nokuphelelisa umuntu. Empeleni, impi noSathane akukhona ukuhloma izikhali ubhekane noSathane, kodwa insindiso yomuntu, ukusebenza impilo yomuntu, kanye nokushintsha isimo somuntu ukuze afakazele uNkulunkulu. USathane unqotshwa kanje. USathane unqotshwa ngokushintsha isimo esikhohlakele somuntu. Uma uSathane esehluliwe, okungukuthi, uma umuntu esesindisiwe ngokuphelele, uSathane ojabhile uyoboshwa ngokuphelele, futhi ngaleyo ndlela, umuntu uyobe esesindisiwe ngokuphelele. Ngakho, ingqikithi yensindiso yomuntu impi noSathane, kanti impi noSathane ibonakaliswa esikakhulukazi ensindisweni yomuntu. Isigaba sezinsuku zokugcina, lapho umuntu ezonqotshwa khona, isigaba sokugcina sempi noSathane, kanti futhi umsebenzi wokusindiswa okuphelele komuntu emandleni kaSathane. Incazelo yangaphakathi yokunqotshwa komuntu ukubuya kokusamuntu kukaSathane, umuntu owonakaliswe nguSathane, kuMdali, emuva kokunqotshwa kwakhe, ngalokho uyoshiya uSathane futhi abuyele ngokuphelele kuNkulunkulu. Ngale ndlela umuntu uyobe esesindisiwe ngokuphelele. Ngakho, umsebenzi wokunqoba umsebenzi wokugcina empini ebhekene noSathane, kanye nesigaba sokugcina ekuphatheni kukaNkulunkulu ukuze kuhlulwe uSathane. Ngaphandle kwalo msebenzi, ukusindiswa komuntu okuphelele bekungeke kwenzeke neze ekugcineni, ukuhlulwa ngokuphelele kukaSathane nakho bekungeke kwenzeke neze, futhi isintu besingeke neze sikwazi ukungena esiphethweni esimangalisayo, noma ukukhululeka ethonyeni likaSathane. Ngenxa yalokho, umsebenzi wokusindiswa komuntu ngeke uphethwe ngaphambi kukuthi impi noSathane iphethwe, ngoba umnyombo womsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu ungenxa yokusindiswa kwesintu. Isintu sasekuqaleni sasisezandleni zikaNkulunkulu, kodwa ngenxa yokulingwa nguSathane nokonakaliswa, umuntu waboshwa nguSathane futhi wawela ezandleni zomubi. Ngakho, uSathane waba yinto okufanele yehlulwe emsebenzini wokuphatha kukaNkulunkulu. Ngoba uSathane wamngena umuntu, nangenxa yokuthi umuntu uwumsebenzi wokuphatha kukaNkulunkulu, uma umuntu ezosindiswa, kufanele ahlwithwe ezandleni zikaSathane, okusho ukuthi umuntu kufanele abuyiswe emva kokuthunjwa nguSathane. Ngalokhu, uSathane kufanele anqotshwe ngezinguquko esimweni somuntu esidala, izinguquko ezibuyisela umqondo wakhe wokuqala, bese ngale ndlela, umuntu, obethunjiwe, ehlwithwa ezandleni zikaSathane. Uma umuntu ekhululiwe ethonyeni nokuboshwa nguSathane, uSathane uyojabhiswa, umuntu ekugcineni uyobuyiselwa emuva, futhi uSathane uyohlulwa. Futhi ngenxa yokuthi umuntu usekhululiwe ethonyeni elimnyama likaSathane, umuntu uyoba impango yayo yonke lempi, futhi uSathane uyoba umenziwa oyojeziswa uma lempi seyiphelile, emuva kwalokho umsebenzi usuwonkana wokusindiswa komuntu uyobe usuqediwe.
UNkulunkulu akanabutha maqondana nezidalwa futhi Ufisa kuphela Ukuhlula uSathane. Wonke umsebenzi Wakhe-noma ngabe ukujezisa noma ukwahlulela-uqondiswe kuSathane; wenziwa ngenxa yokusindiswa komuntu, wonke ungenxa yokuhlula uSathane, futhi unenjongo eyodwa: ukulwa noSathane kuze kufike ekugcineni! Futhi uNkulunkulu akasoze aphumula ngaphambi kokuba Esenqobile uSathane! Uzophumula kuphela uma Esemhlulile uSathane. Ngoba wonke umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu uqondiswe kuSathane, futhi ngenxa yokuthi labo abonakaliswe nguSathane bonke bangaphansi kokuphathwa ngamandla kaSathane futhi bonke baphila ngaphansi kwamandla kaSathane, ngaphandle kokulwa noSathane nokuhlukana naye, uSathane ubengeke abakhulule laba bantu esandleni sakhe, futhi bebengeke bazuzeke. Uma bebengazuzwa, bekuzofakazela ukuthi uSathane akakahlulwa, ukuthi akakaqethulwa. Ngakho, ohlelweni lukaNkulunkulu lweminyaka eyizi-6,000 lokuphatha, esigabeni sokuqala Wenza umsebenzi womtheho, esigabeni sesibili Wenza umsebenzi weNkathi yoMusa, okungukuthi, umsebenzi wokubethelwa, futhi esigabeni sesithathu Wenza umsebenzi wokunqoba umuntu. Wonke lo msebenzi uqondiswe ezingeni uSathane onakalise ngalo isintu, konke kungenxa yokuhlula uSathane, futhi asikho nasinye isigaba ekungesona sokwehlula uSathane. Ingqikithi yomsebenzi weminyaka yizi-6,000 wokuphatha kukaNkulunkulu yimpi ebhekene nodrago omkhulu obomvu, kanti nomsebenzi wokuphatha isintu nawo ngumsebenzi wokwehlula uSathane, nomsebenzi wokulwa noSathane. UNkulunkulu uselwe iminyaka eyizi-6, 000, futhi ngokunjalo, wasebenza iminyaka ewu 6, 000, ukuze ekugcineni angenise umuntu embusweni omusha. Uma uSathane esenqotshiwe, umuntu uyokhululeka ngokuphelele. Akuyona indlela lapho uqonde khona umsebenzi kaNkulunkulu namhlanje? Lokhu kanye yindlela lapho umsebenzi kaNkulunkulu uqonde khona: ukukhululeka nokukhululwa komuntu okuphelele, ukuze angabi ngaphansi kwanoma imiphi imigomo, noma avinjelwe noma ingaziphi izibopho nemikhawulo. Wonke lo msebenzi wenziwa ngokuhambisana nesiqu senu nangokuhambisana nezidingo zenu, okusho ukuthi niyahlinzekwa nganoma yini eningayifeza. Akukhona “ukuphushela idada othini,” ukuphoqelela noma yini phezu kwenu; kunalokho, wonke lo msebenzi wenziwa ngokuhambisana nezidingo zenu zangoqobo. Isigaba ngasinye somsebenzi sihambisana nezidingo kanye nezimfuneko zomuntu, futhi ngezokuhlula uSathane. Empeleni, ekuqaleni kwakungekho zithiyo phakathi koMdali nezidalwa Zakhe. Zonke zidalwa uSathane. Umuntu akasakwazi ukubona noma ukuthinta noma yini ngenxa yokuphazamisa kukaSathane nokukhohlakala kwakhe. Umuntu nguye ohlushwayo, nguye okhohlisiwe. Uma uSathane esehluliwe, izidalwa zizombona uMdali, noMdali uzobuka izidalwa futhi akwazi ukuzihola Yena uqobo. Lena yiyo kuphela impilo ekufanele umuntu abe nayo emhlabeni. Ngakho, umsebenzi kaNkulunkulu esikakhulukazi owokwehlula uSathane, futhi uma uSathane esehluliwe, yonke into iyobe isixazululekile. Namhlanje ubonile ukuthi kuyinto ebalulekile ukufika kukaNkulunkulu phakathi kwabantu. Akezanga ukuzochitha usuku ngalunye ekukha izici, ukusho lokhu nalokhuya, noma ukuvumela ukuthi umbone ukuthi ubukeka kanjani nje kuphela, nokuthi ukhuluma kanjani futhi uphila kanjani. UNkulunkulu akazange athathe isimo senyama ukumane akuvumele ukuthi umbuke, noma ukukuvula amehlo akho, noma ukukuvumela ukuthi uzwe izimfihlakalo akhulume ngazo kanye nezimpawu eziyisikhombisa azivulile. Kunalokho, uthathe isimo senyama ukwehlula uSathane. Ufikile uqobo lwakhe esenyameni phakathi kwabantu ukuze asindise abantu, ukulwa noSathane, futhi lokhu ukuba semqoka kokuthatha kwakhe isimo somzimba. Ukuba bekungeve kungokokuhlula uSathane, ubengeke awenze lo msebenzi yena mathupha. UNkulunkulu uze emhlabeni ukuzokwenza umsebenzi wakhe phakathi kwabantu, ukuziveza yena mathupha kubantu kanye nokuvumela umuntu ukumbona; yinto encane lena? Kukhulu impela! Akunjengoba umuntu ecabanga nje engqondweni yakhe ukuthi uNkulunkulu ufike ukuze umuntu ambuke nje, ukuze umuntu aqonde ukuthi uNkulunkulu ukhona ngokoqobo futhi akuve kuwukuthi akaqondakali noma uyize, nokuthi uNkulunkulu uphakeme kodwa uthobekile. Kungenzeka ukuthi kulula kangako nje? Yingoba impela uSathane wonakalisile inyama yomuntu, nokuthi umuntu nguye uNkulunkulu ahlose ukumsindisa, yingakho uNkulunkulu kufanele athathe isimo senyama ukuze alwe noSathane nokuthi eluse umuntu yena ngokwakhe. Yilokhu kuphela okuwusizo emsebenzini wakhe. Imizimba yenyama emibili kaNkulunkulu ibekhona ukuze ehlule uSathane, futhi ibe khona ukuze asindise umuntu kangcono. Ingoba lowo olwa noSathane kungaba uNkulunkulu kuphela, noma nguMoya kaNkulunkulu noma uNkulunkulu ethathe isimo somzimba. Ngamafuphi, ngeke kube yizingelosi ezilwa noSathane, ingasaphathwa eyomuntu, owonakaliswe nguSathane. Izingelosi azinamandla okukwenza, kanti umuntu akanamandla futhi nangaphezulu. Kanjalo, uma uNkulunkulu efuna ukusebenza impilo yomuntu, uma efisa ukuza yena mathupha emhlabeni azosindisa umuntu, kufanele athathe isimo senyama mathupha, kanti nangobuyena bakhe bemvelo kanye nomsebenzi okufanele awenze, afike phakathi kwabantu futhi Asindise umuntu mathupha. Uma kungenjalo, uma bekunguMoya kaNkulunkulu noma umuntu obenza lo msebenzi, lempi beyizohluleka unomphela ukufeza umphumelo wayo, futhi beyingeke ize iphele. Kuphela uma uNkulunkulu ethatha isimo senyama ukuyolwa noSathane mathupha phakathi kwabantu ilapho umuntu eyoba nethuba lokusindiswa. Ngaphezu kwalokho, yilapho kuphela uSathane ezothola ukujabhiswa, futhi asale engenamathuba angawasebenzisa noma amacebo angawenza. Umsebenzi waNkulunkulu onesimo sesintu ngeke ufezwe uMoya kaNkulunkulu, futhi nangaphezulu ngeke wenziwa umuntu wenyama ewenzela uNkulunkulu, ngoba umsebenzi awenzayo ngowempilo yomuntu. Uma umuntu ubengabamba iqhaza kule mpi, ubezobaleka esebuphixiphixini obudabukisayo kuphela, futhi ubengeke akwazi nempela ukushintsha isimo somuntu esonakele. Ubengeke akwazi ukusindisa umuntu esiphambanweni, noma ukunqoba sonke isintu esidlubulundelayo, kodwa ubezokwazi kuphela ukwenza umsebenzana nje omncane ongedluli ezimisweni, noma umsebenzi ongaphathelene nokuhlulwa kukaSathane. Ngakho-ke ingabe uzihluphelani? Kuyini ukubaluleka komsebenzi ongeke uzuze isintu, kungasaphathwa okokwehlula uSathane? Ngakho-ke, impi noSathane ingenziwa kuphela uNkulunkulu uqobo Lwakhe, futhi ubengeke nhlobo umuntu akwazi ukuwenza. Umsebenzi womuntu ukulalela nokulandela, ngoba umuntu akakwazi ukwenza umsebenzi ohlobene nokudala amazulu nomhlaba, noma, ngaphezu kwalokho, enze umsebenzi wokwehlula uSathane. Umuntu angenelisa uMdali ngaphansi kokuholwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe, ngalokho uSathane uyahlulwa; iyo kuphela into umuntu angayenza. Ngakho, njalo lapho impilo entsha iqala, okungukuthi, umsebenzi wenkathi entsha uqala, lo msebenzi wenziwa nguNkulunkulu uqobo Lwakhe mathupha, ngaleyo ndlela uhola inkathi yonkana, futhi uvula indlela entsha yesintu. Ukuqala kwenkathi entsha ngayinye, yisiqalo esisha empini noSathane, umuntu angena ngayo embusweni omusha futhi omuhle kakhulu kanye nenkathi entsha eholwa mathupha nguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Umuntu ungubasi wayo yonke into, kodwa labo abazuziwe bayoba izithelo zazo zonke izimpi noSathane. USathane ungumonakalisi wezinto zonke, ungohlulwayo ekugcineni kwazo zonke izimpi, futhi nguye oyojeziswa emuva kwalezimpi. Phakathi kukaNkulunkulu, umuntu noSathane, uSathane kuphela oyozondwa futhi alahlwe. Labo abazuzwa nguSathane kodwa babuye bathathwa nguNkulunkulu, ngaleso sikhathi, kuyoba yibo abayothola ukujeziselwa uSathane. Kulaba bobathathu, uNkulunkulu kuphela ofanele ukukhonzwa izinto zonke. Labo aboniwa nguSathane kodwa babuye bathathwa nguNkulunkulu, futhi abalandela indlela kaNkulunkulu, okwamanje, baba yilabo abazothola isithembiso sikaNkulunkulu futhi bahlulele ababi benzela uNkulunkulu. UNkulunkulu uzonqoba nakanjani futhi uSathane uzohlulwa nakanjani, kodwa phakathi kwabantu kukhona labo abayowina kukhona labo abayohlulwa. Labo abaphumelelayo bayoba kanye nabanqobi, futhi labo abayohlulwa bayoba kanye nabehlulwayo; lokhu ukuhlukanisa ngakunye ngohlobo lwakho, ngumphumela wokugcina womsebenzi kaNkulunkulu, kuyinhloso yawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu, futhi awusoze washintsha. Umnyombo womsebenzi osemqoka wokuphatha kukaNkulunkulu uqondiswe ekusindisweni komuntu, futhi uNkulunkulu uthatha isimo sesintu esikakhulukazi ngenxa yalo mnyombo, ngenxa yalo msebenzi, futhi ukuze ahlule uSathane. Ngesikhathi sokuqala uNkulunkulu ethatha isimo sesintu, nakho kwenzelwa ukuze ahlule uSathane: Wathatha isimo sesintu yena mathupha, futhi wabethelwa esiphambanweni mathupha, ukuze aqede umsebenzi wempi yokuqala, okwabe kungukuhlengwa kwesintu. Ngokufanayo, lesigaba somsebenzi senziwa nguNkulunkulu mathupha, othathe isimo sesintu ukuze enze umsebenzi wakhe phakathi kwabantu, ukukhuluma izwi lakhe mathupha nokuvumela umuntu ukuba ambone. Empeleni, akunakuvinjelwa ukuthi wenza neminye imisebenzi endleleni, kodwa isizathu esisemqoka esidala enze umsebenzi wakhe mathupha ukuhlula uSathane, ukunqoba isintu sisonkana, nokubazuza laba bantu. Ngakho, umsebenzi waNkulunkulu esesimweni sesintu yinto enkulu impela. Uma inhloso yakhe bekunguku khombisa umuntu ukuthi uNkulunkulu uthobekile futhi ufihlekile, nokuthi uNkulunkulu Ukhona ngokoqobo, uma bekungenxa yokwenza lo msebenzi kuphela, besingeke sibe khona isidingo sokuba nomzimba womuntu. Ngisho noma uNkulunkulu ubengazange athathe umzimba womuntu, ubengakuveza ukuthobeka nokufihleka kwakhe, ubukhulu nobungcwele bakhe, kumuntu ngqo, kodwa lezi zinto aziphathelene nomsebenzi wokuphatha isintu. Azikwazi ukusindisa umuntu noma ukumenza aphelele, kungasaphathwa ukuhlula uSathane. Uma ukwehlulwa kukaSathane bekuphathelene noMoya ulwa nomunye umoya, umsebenzi bewuzoba ngesigqi esibonakalayo esephansi kakhulu; bewungeke ukwazi ukuzuza umuntu futhi bewuzomosha isimiselo namathemba omuntu. Kanjalo, umsebenzi kaNkulunkulu ubaluleke kakhulu kakhulu. Akukhona kuphela ukuthi umuntu kufanele ambone, noma ukuze amehlo omuntu avuleke, noma ukumfaka umdlandla kancane nokumkhuthaza; umsebenzi onjengalo awubalulekile. Uma ungakhuluma ngalolu hlobo lo lwazi kuphela, kuyasho ukuthi awazi ukubaluleka kwangempela kokuthatha isimo sesintu kukaNkulunkulu.
Umsebenzi walo lonke uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu, wenziwa nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Isigaba sokuqala—ukudalwa komhlaba—kwenziwa mathupha nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe, futhi ukuba kwakungenziwanga, kwakungekho omunye owayengakwazi ukudala isintu; isigaba sesibili kwaba ukuhlengwa kwesintu sonke, nakho kwenziwa mathupha nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe; isigaba sesithathu sisobala: Kunesidingo esikhulu nakakhulu sokuba isiphetho sawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu senziwe nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe mathupha. Umsebenzi wokuhlenga, wokunqoba, wokuzuza kanye nokuphelelisa isintu sisonkana wonke wenziwa mathupha nguNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Uma ubengawenzanga lo msebenzi mathupha, ubunjalo Bakhe bebungeke bumelwe ngumuntu, noma umsebenzi wakhe wenziwe ngumuntu. Ukuze ehlule uSathane, ukuze azuze isintu, futhi ukuze anike umuntu impilo ejwayelekile emhlabeni, uhola umuntu mathupha futhi asebenze phakathi kwabantu mathupha; ngenxa yohlelo lwakhe lokuphatha lulonke, futhi ngenxa yomsebenzi wakhe wonke, kufanele awenze yena mathupha lomsebenzi. Uma umuntu ekholwa kuphela ukuthi uNkulunkulu weza ukubonwa nguye nokumjabulisa, izinkolelo ezinjalo azinasigqi, azisho lutho. Ulwazi lomuntu lukha phezulu kakhulu! Yingokuwenza Yena uqobo lwakhe kuphela indlela uNkulunkulu abengawenza lomsebenzi ngesineke nangokuphelele. Umuntu akakwazi ukuwenzela uNkulunkulu. Njengoba engenakho ubunjalo bukaNkulunkulu, noba ubukhona bakhe, akakwazi ukwenza umsebenzi Wakhe, futhi noma ngabe umuntu ubewenza, bewungeke ube namphumela. Okokuqala uNkulunkulu athatha isimo sesintu, kwakungenxa yokuhlenga, ukuhlenga sonke isintu esonweni, ukwenza umuntu akwazi ukuba ahlanzeka nokuthethelelwa izono zakhe. Umsebenzi wokunqoba nawo wenziwa nguNkulunkulu mathupha phakathi kwabantu. Uma, kule sigaba, uNkulunkulu ubekhuluma iziprofetho kuphela, umprofethi noma umuntu onesiphiwo ubengatholakala ukuthatha indawo yakhe; uma isiprofetho kuphela ebesikhulunywa, umuntu ubengamela uNkulunkulu. Kepha uma umuntu ubengenza mathupha umsebenzi kaNkulunkulu uqobo lwakhe futhi ukuba ubengasebenza impilo yomuntu, ubengeke akwazi neze ukuwenza lomsebenzi. Kumele wenziwe mathupha nguNkulunkulu uqobo lwakhe: uNkulunkulu kufanele athathe isimo sesintu ukwenza lo msebenzi. ENkathini yezwi, uma isiprofetho kuphela besikhulunywa, umprofethi u-Isaya noma u-Elija ubengatholakala ukuwenza lo msebenzi, futhi besingeke sibe khona isidingo sokuthi uNkulunkulu uqobo Lwakhe awenze Yena mathupha. Ngenxa yokuthi umsebenzi owenziwe kulesi sigaba awukhona nje ukukhuluma ngesiphrofetho, futhi ngenxa yokuthi kubaluleke kakhulu, ukuthi umsebenzi wamazwi usetshenziselwe ukunqoba umuntu nokwehlula uSathane, lo msebenzi awunakwenziwa ngumuntu, futhi kufanele wenziwe mathupha nguNkulunkulu uqobo. ENkathini yoMthetho uJehova Wenza ingxenye yomsebenzi kaNkulunkulu, emuva kwalokho Wakhuluma amazwi athile futhi wenza umsebenzi othile ngabaprofethi. Yingoba umuntu ubengawenza umsebenzi kaJehova, futhi iziboni zazikwazi ukubikezela izinto nokuhumusha amaphupho, zenzela Yena. Umsebenzi owenziwa ekuqaleni kwakungewona umsebenzi wokushintsha isimo somuntu ngqo, kuthi wawungahlangene nesono somuntu, futhi umuntu wayefanele ukugcina umthetho kuphela. Ngakho uJehova akazange athathe isimo sesintu futhi aziveze yena uqobo Lwakhe kumuntu; kunalokho Wakhuluma ngqo noMose nabanye, wabenza bakhuluma futhi basebenzela Yena, futhi wabenza ukuthi basebenze ngqo phakathi kwesintu. Isigaba sokuqala somsebenzi kaNkulunkulu kwabe kungukuhola umuntu. Kwabe kungukuqala kwempi noSathane, kodwa le mpi yayingakaqali ngokusemthethweni. Impi esemthethweni noSathane yaqala ngesikhathi uNkulunkulu ethatha isimo sesintu okokuqala, futhi isiqhubeke kwaze kwaba inamuhlanje. Isiwombe sokuqala salempi senzeka lapho uNkulunkulu othathe isimo sesintu ebethelwa esiphambanweni. Ukubethelwa kukaNkulunkulu othathe isimo sesintu kwehlula uSathane, kuthi kwabe kuyisigaba sokuqala sempi esinempulelo. Lapho uNkulunkulu othathe isimo sesintu eqala ngokuqondile ukusebenza impilo yomuntu, lokhu kwakuyisiqalo esisemthethweni somsebenzi wokuzuza umuntu, futhi ngenxa yokuthi lo kwakuwumsebenzi wokushintsha isimo somuntu esidala, kwakuwumsebenzi wokulwa noSathane. Isigaba somsebenzi esenziwe guJehova ekuqaleni kwakumane kungukuhola impilo yomuntu emhlabeni. Kwabe kungukuqala komsebenzi kaNkulunkulu, nakuba wawungakafaki impi, noma umsebenzi onzima, kwaba isisekelo somsebenzi wempi owawu seza. Emuva kwalokho, isigaba sesibili somsebenzi ngeNkathi yoMusa sasiphathelene nokushintsha isimo somuntu esidala, okusho ukuthi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wasebenza impilo yomuntu. Lokhu kwakudingeka kwenziwe nguNkulunkulu mathupha: kwakufuneka ukuthi uNkulunkulu mathupha athathe isimo sesintu, futhi uma ubengasithatha isimo sesintu, akekho ubengathatha indawo Yakhe kulesi sigaba somsebenzi, ngoba sasimele umsebenzi wokulwa ngqo noSathane. Uma umuntu ubenzele uNkulunkulu lo msebenzi, lapho umuntu esemile phambi kwaSathane, uSathane ubengeke athobe kuthi bekungenakwenzeka ukumehlula. Kwakudingeka kube uNkulunkulu ethathe isimo sesintu owayezofika amehlule, ngoba ingqikithi kaNkulunkulu othathe isimo somuntu, kusenguNkulunkulu, useyimpilo yomuntu, futhi usenguMdali; noma kwenzekani, ubunjalo nengqikithi Yakhe ngeke kushintshe. Ngakho-ke, Wathatha isimo sesintu futhi wenza umsebenzi ukudala ukuzithoba okuphelele kukaSathane. Ngesikhathi sesigaba somsebenzi wasezinsukwini zokugcina, uma umuntu ubengenza lo msebenzi futhi uma ubengenziwa ukuthi akhulume amazwi ngqo, ubengeke akwazi ukuwakhuluma, futhi uma isiprofetho besishiwo, besingeke sikwazi ukunqoba umuntu. Ngokuthatha isimo sesintu, uNkulunkulu uyeza ukuzohlula uSathane nokudala ukuzithoba kwakhe okuphelele. Lapho ehlula uSathane ngokuphelele, futhi uyamzuza umuntu ngokuphelele, emuva kwalokhu lesi sigaba somsebenzi siyophela futhi impumelelo izuzwe. Ekuphatheni kukaNkulunkulu, umuntu akakwazi ukummela uNkulunkulu. Esikakhulukazi, umsebenzi wokuhola inkathi kanye nokuqalisa umsebenzi omusha udinga kakhulu impela ukwenziwa mathupha nguNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ukunika abantu izambulo nokubahlinkeka ngesiprofetho kungenziwa ngumuntu, kodwa uma kuwumsebenzi okufanele wenziwe mathupha nguNkulunkulu, umsebenzi wempi phakathi kwaNkulunkulu uqobo Lwakhe kanye noSathane, ngakho lomsebenzi awukwazi ukwenziwa ngumuntu. Esigabeni sokuqala somsebenzi, lapho kwakungekho mpi noSathane, uJehova wahola abantu bakwa-Israyeli mathupha, esebenziza isiprofetho esasikhulunywa ngaba profethi. Emuva kwalokho, isigaba sesibili somsebenzi kwabe kungukulwa noSathane, futhi uNkulunkulu uqobo Lwakhe wathatha isimo sesintu, weza esenyameni, ukwenza lo msebenzi. Nanoma yini ephathelene nempi noSathane, futhi iphathelene nokuthatha isimo sesintu kukaNkulunkulu, okusho ukuthi lempi ngeke iliwe ngumuntu. Uma umuntu ubengalwa impi, ubengeke akwazi ukuhlula uSathane. Ubengaba kanjani namandla okulwa naye njengoba esengaphansi kwamandla akhe? Umuntu uphakathi nendawo: Uma uncika ngakuSathane, ungowaSathane, kodwa uma wenelisa uNkulunkulu ungoka Nkulunkulu. Uma umuntu ebengamela uNkulunkulu emsebenzini walempi, ubengakwazi? Uma ubekwenzile, ubengeke kube sewabhubha kudala? Ubengeke kube sewangena ezweni labafileyo kudala? Ngakho, umuntu akakwazi ukuthatha indawo kaNkulunkulu emsebenzini Wakhe, okungukuthi umuntu akanayo ingqikithi kaNkulunkulu, futhi uma ubengalwa noSathane bengeke akwazi ukumehlula. Umuntu angenza umsebenzi othile kuphela; angabazuza abantu abathile, kodwa akakwazi ukumela uNkulunkulu emsebenzini kaNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ubengalwa kanjani umuntu noSathane? USathane ubengakuthumba ngisho ngaphambi kokuthi uqale. Kulapho kuphela uNkulunkulu uqobo Lwakhe elwa noSathane futhi umuntu elandela futhi elalela uNkulunkulu kulesi sisekelo, lapho umuntu engazuzwa uNkulunkulu futhi aphunyuke ezibophweni zikaSathane. Lokho umuntu angaphumelela ukukwenza ngokuhlakanipha namakhono akhe kunemigomo kakhulu; akakwazi ukwenza umuntu aphelele, ukumhola, futhi nakakhulu, ukumehlula uSathane. Ingqondo nokuhlakanipha komuntu akukwazi ukubhuntshisa amacebo kaSathane, ngakho umuntu ubengalwa kanjani ngako?
Bonke lapho abazimisele ukupheleliswa banethuba lokupheleliswa, ngakho wonke umuntu kufanele akhululeke: ngesikhathi esizayo nizongena nonke ekupheleni. Kodwa uma ungazimisele ukupheleliswa, futhi ungazimisele ukungena embusweni omuhle ngokumangalisayo, lokho indaba yakho. Bonke labo abazimisele ukupheleliswa futhi abathembekile kuNkulunkulu, bonke labo abalalelayo, nabo bonke labo abawenzayo umsebenzi wabo ngokuthembeka-bonke abantu abanjalo bangapheleliswa. Namhlanje, bonke labo abangawenzi umsebenzi wabo ngokuthembeka, bonke labo abangathembekile kuNkulunkulu, bonke labo abangamthobeli uNkulunkulu, esikakhulukazi labo asebekutholile ukukhanyiselwa nokukhanya kukaMoya Oyingcwele kodwa abangakwenzi-bonke abantu abanjalo abakwazi ukupheleliswa. Bonke labo abazimisele ukuthembeka nokulalela uNkulunkulu bangapheleliswa, ngisho noma benokungabinalwazi okuncane; bonke labo abazimisele ukushisekela bangapheleliswa. Asikho isidingo sokukhathazeka ngalokhu. Inqobo nje uma uzimisele ukushisekela uqonde kule ndlela, ungapheleliswa. Angizimisele ukushiya noma ukukhipha noma ibaphi abalabo phakathi kwenu, kodwa uma umuntu engazikhandleli ukwenza kahle, uzilimaza ngokwakho; Akuyimi okukhiphayo, kodwa uwe uqobo. Uma wena uqobo ungazikhandli ukwenza kahle—uma uvilapha, noma ungawenzi umsebenzi wakho, noma ungathembekile noma ungashisekeli iqiniso, futhi wenza umathanda, uma uziphatha ngobudlabha, ulwela udumo nomcebo wakho, unobudlelwano obungacopheleli ekubhekaneni nobulili obungefani nobakho, khona-ke uyothwala umthwalo wezono zakho; awufanelwe ukudatshukelwa unoma ngubani. Inhloso Yami ukuthi nonke nipheleliswe, nokuthi okungenani-ke ninqotshwe, ukuze lesi sigaba somsebenzi siqedwe ngempumelelo. Isifiso sikaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu apheleliswe, ukuthi bazuzwe Nguye ekugcineni, ukuthi bahlanzwe Nguye ngokuphelele, ukuba babe yilabo Abathandayo. Akusho lutho noma Ngithi ubuthuntu noma usezingeni eliphansi—konke lokho kungamaqiniso. Ukusho Kwami lokho, akusho ukuthi Ngizokushiya, ukuthi Ngililahlile ithemba ngawe, kungasaphathwa ukuthi Angizimisele ukukusindisa. Namhlanje ngize ukuzokwenza umsebenzi wokusindisa nina, okungukuthi umsebenzi engiwenzayo ungukuqhubeka komsebenzi wensindiso. Wonke umuntu unethuba lokupheleliswa: Inqobo nje uma nizimisele, inqobo uma nishisekela, ekugcineni nizowuthola lo mphumela, futhi namunye wenu oyolahlwa. Uma usezingeni eliphansi, imibandela Yami kuwe izohambisana nezinga okulo; uma usezingeni eliphezulu, imibandela Yami kuwe izohambisana nezinga lakho eliphezulu; uma ungenalo ulwazi futhi ungakwazi ukufunda nokubhala, imibandela Yami izohambisana nokungakwazi kwakho ukufunda nokubhala kwakho; uma ukwazi ukufunda nokubhala, imibandela Yami izohambisana nokuthi ufundile; uma usumdala ngeminyaka, imibandela Yami izobe ihambelana neminyaka yakho; uma ukwazi ukwemukela kakhe izihambi nezivakashi, imibandela Yami izohambelana nalokho; uma uthi ngeke ukwazi ukwemukela izihambi nezivakashi, kodwa ube ukwazi ukwenza okuthile, noma ukusakaza iVangeli, noma ukunakekela ibandla, noma ukulungisa izinto ezithile ezijwayelekile, ukukuphelelisa Kwami kuzohambelana nalowo msebenzi owenzayo. Ukuthembeka, ukulalela kuze kube sekugcineni, kanye nokushisekela uthando oluphakeme kunalo lonke lukaNkulunkulu—yilokhu okufanele ukwenze, futhi akukho ukwenza okuhle okudlula lokhu kokuthathu. Ekugcineni umuntu ulindeleke ukuthi abenazo lezi zinto zontathu, futhi uma engazithola uyopheleliswa. Kodwa, Ngaphezu konke, kufanele ushisekele, kufanele uphokophele ngenkuthalo ukuyaphambili naphezulu, futhi ungayethi mayelana nalokho. Ngithe wonke umuntu unethuba lokupheleliswa, futhi angakwazi ukupheleliswa, futhi lokhu kuyiqiniso, kodwa awuzami ukuba ngcono ekushisekeleni kwakho. Uma ungaphumeleli kule mibandela emithathu, ngakho ekugcineni uyokhishwa. Ngifuna nonke nifinyelele, ngifuna nonke ukuba nibe nomsebenzi nokukhanyiseleka kukaMoya Oyingcwele, futhi nikwazi ukulalela kuze kube ekugcineni ngci, ngoba lona ngumsebenzi nonke ngamunye ekufanele niwenze. Uma nonke seniwenzile umsebenzi wenu, niyobe seniphelelisiwe nonke, niyoba nobufakazi obuhlokomayo. Bonke labo abanobufakazi ilabo abanqobile phezu kwaSathane futhi bazuza isithembiso sikaNkulunkulu, futhi bayilabo abayosala baphile esiphethweni esihle ngokumangalisayo.
Okwedlule: Ingqikithi KaKristu Ukuthobela Intando KaBaba Osezulwini
Okulandelayo: UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni
Akukho muntu okwazi ukuphila ngokuzimela ngaphandle kwalabo abanikwe umkhombandlela okhethekile nokuqondiswa nguMoya oNgcwele, ngoba...
Inkathi endala seyidlulile, futhi inkathi entsha seyifikile. Unyaka nonyaka, usuku nosuku, uNkulunkulu usenze umsebenzi omkhulu. Wafika...
Lapho usuzuze ukuphila ubuntu obujwayelekile, futhi uye wapheleliswa, nakuba ungenakukwazi ukukhuluma isiprofetho, noma ezinye...